Archive du 20170719
Hery Rajaonarimampianina Nisy Frantsay saika hamono ?
Re avy amina loharanom-baovao iray fa nisy ny fikasana hamono ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, tsy ela akory izay ka mersenera vahiny, teratany Frantsay manana fiaviana Alzerianina no nikotrika azy.
Rafitra eto Madagasikara Natao hiaro ny tombontsoan’ny fanjakana foibe
Tsy mampandeha ny fitantanan-draharaha eto Madagasikara, hoy ny Namana Olona Tsara dia natao hiaro ny tombontsoan’olom-bitsy manokana ireo rafitra napetraka eto amin’ny firenena.
Seraseran’ny fitondrana “Seraseran’ariary roa”
Nandefa hafatra mivaivay ho an’ny fanjakana HVM ny fikambanana Wake Up Madagascar omaly.
Alain Ramaroson Alentika mihitsy ve ?
Nolavina indray ny fahafahana vonjimaika nangatahin’ny filohan’ny antoko politika Masters, Alain Ramaroson, izay notorian’ny fianakaviany noho ny raharaha fanaovana hosoka taratasin-tany eny Andoharanofotsy sy Ambohimangakely, fangatahana fahadimy io.
Minisiteran’ny Vola Sambany hotantanana vehivavy
Tontosa omaly teny Antaninarenina ny famindram-pahefana teo amin’ny minisitry ny vola teo aloha Rakotoarimanana Gervais sy ny vaovao Sehenosoa Vonintsalama Andriambololona
Fandaharana “Tsy mahaleo ny sampona » Nosavaina ny tranon’i Fetra
Rehefa nalaina am-bavany nandritry ny 4 ora teny amin’ny Toby Ratsimandrava Andrefanambohijanahary mikasika ilay fanamiana miaramila nilatroan’ny mpanentana ny fandaharana “Tsy mahaleo ny sampona”,
Mahaly Olivier sy Gérvais Rakotoarimanana Nifandramatra hatramin’ny farany?
Mivoaka ny resaka amin’izao fotoana izao fa fifamaliana teo amin’ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier no nahatonga ny Minisitry ny vola sy ny teti-bola teo aloha Gervais Rakotoarimanana nametra-pialana.
Zon’ny voafonja Tsy mbola voahaja eto Madagasikara
Tsy mbola voahaja ny zon’ny voafonja eto amintsika amin’ny ankapobeny.
Anisan’ny misedra olana amina resaka fotodrafitrasa ny fokontany Nanisana Iadimbola na dia mbola ao anatin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra aza.
Afrobasket 2017 U 16 Resin’i Madagasikara i Alzeria
Lavon’i Rwanda 73-70 ny ekipa U 16 Malagasy tamin’ny lalao miverin’ny Afrobasket 2017 U 16 natao tany amin’ny kianja
Tampina ny daomy !
Tampina ny daomy amin’ny resaka mangarahara sy fampanjakana ny tany tan-dalàna eto Madagasikara.
Mpamatsy vola Ho tezitra amintsika, hoy i Tabera Randriamanantsoa
Matoa mametra-pialana ny olona iray dia misy antony, hoy ny filohan’ny CRN, Tabera Randriamanantsoa, raha nilaza ny heviny omaly mikasika ny fahitany ny fametraham-pialan’ny minisitry ny vola sy ny tetibola, Gervais Rakotoarimanana.
Boriborintany Antananarivo Renivohitra Efa mampiasa «caisse enregistreuse»
Tanjon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra ny fampitomboana hatrany ny vola miditra eo anivon’ny Fiadidiana ny tanàna.
Kaominina Anosizato Andrefana Nahazo fitaovana avy amin’ny Orange Madagascar
Anisan’ny kaominina iray voasokajy ho mahafa-po amin’ny fandraisana olona ny kaominina Anosizato Andrefana.